အခုလို မိုးရာသီမှာ မတော်တဆ ဖုန်းထဲရေဝင်သွားခဲ့ရင် ဒီအချက်တွေကို မဖြစ်မနေလုပ်ပါ - Barnyar Barnyar
အခုလို မိုးရာသီမှာ မတော်တဆ ဖုန်းထဲရေဝင်သွားခဲ့ရင် ဒီအချက်တွေကို မဖြစ်မနေလုပ်ပါ
October 6, 2021 KNOWLEDGE 0
တကယ်လို့ သင့်ရဲ့ဖုန်းကရေထဲကျသွားတဲ့အခါ ၊ရေစိုသွားတဲ့အခါ-ဖုန်းကိုချက်ချင်းအသုံးမပြုပါနဲ့။ ရေထဲကဆယ်ယူထားပြီး အရင်ဆုံးပါဝါပိတ်ထားလိုက်ပါ။
Sim ကဒ်နဲ့တခြား SD ကဒ်လိုမျိုးအရာတွေကိုထုတ်ထားပါ။
သဘတ် ဒါမှမဟုတ် ရေစုတ်မယ့်အဝတ်တစ်ခုခုနဲ့ ဖုန်းကိုသုတ်ပေးပါ။ ပြီးရင်တော့ ဖုန်းရဲ့အပေါက်လေးတွေကနေရေတွေထွက်လာနိုင်အောင် ဖြေးဖြေးသာလှုပ်ခါပေးပါ။
ဖုန်းရေစိုသွားတဲ့အခါ ဆန်ကိုလဲအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဆန်က တော်တော်လေးရေစုပ်ယူအားကောင်းတာကြောင့်ပါ။ ဇလုံကြီးကြီးတစ်ခုထဲမှာ ဖုန်းကိုအရင်ထည့်ပါ။ ပြီးရင် ဆန်တွေကို ဖုန်းနှစ်မြုပ်သွားအောင်ထိ ဖြည့်ထားပါ။ အဲ့ဒီအတိုင်း ဆန်ထဲမှာ ၂၄နာရီတစ်ရက်ကြာအောင်ထားပေးပါ။.
တကယ်လို့ ဖုန်းကပြန်မပွင့်လာသေးဘူးဆိုရင် နောက်တစ်ရက်လောက်ထပ်မြုပ်ထားပါ။ ၃၊၄ ကြိမ်လောက်လုပ်ပြီးလို့မှ ပါဝါပြန်မပွင့်လာသေးဘူးဆိုရင်တော့ ဖုန်းကိုအသုံးပြုလို့မရနိုင်တော့ပါဘူး။ ဆန် အစား ဆီလီကာဂျယ်ကိုလဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ သင့်အိမ်မှာ နွေးနွေးထွေးထွေးရှိတဲ့ ဗီရိုတစ်လုံးလောက်ရှိမယ်ဆိုရင် ဗီရိုထဲမှာ ၂ရက်၊၃ရက်လောက်ထားပေးထားပါ။ ဒီမှာတော့ ဗီရိုကအပးချိန်ခပ်နွေးနွေးသာရှိနေရပါမယ်။ အပူချိန်များတဲ့နေရာတွေကိုတော့ရှောင်မှ ဖြစ်ပါမယ်။
Hair dryer , radiator စတဲ့အရာတွေနဲ့လဲ အခြောက်ခံတာတွေမလုပ်ပါနဲ့။ ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ထားတာမျိုးတွေလဲ မလုပ်ပါနဲ့။
Writer – Min Thu [Daily Hot News ]
အခုလို မိုးရာသီမှာ မတျောတဆ ဖုနျးထဲရဝေငျသှားခဲ့ရငျ ဒီအခကျြတှကေို မဖွဈမနလေုပျပါ
တကယျလို့ သငျ့ရဲ့ဖုနျးကရထေဲကသြှားတဲ့အခါ ၊ရစေိုသှားတဲ့အခါ-
ဖုနျးကိုခကျြခငျြးအသုံးမပွုပါနဲ့။ ရထေဲကဆယျယူထားပွီး အရငျဆုံးပါဝါပိတျထားလိုကျပါ။
Sim ကဒျနဲ့တခွား SD ကဒျလိုမြိုးအရာတှကေိုထုတျထားပါ။
သဘတျ ဒါမှမဟုတျ ရစေုတျမယျ့အဝတျတဈခုခုနဲ့ ဖုနျးကိုသုတျပေးပါ။ ပွီးရငျတော့ ဖုနျးရဲ့အပေါကျလေးတှကေနရေတှေထှေကျလာနိုငျအောငျ ဖွေးဖွေးသာလှုပျခါပေးပါ။
ဖုနျးရစေိုသှားတဲ့အခါ ဆနျကိုလဲအသုံးပွုနိုငျပါတယျ။ ဆနျက တျောတျောလေးရစေုပျယူအားကောငျးတာကွောငျ့ပါ။ ဇလုံကွီးကွီးတဈခုထဲမှာ ဖုနျးကိုအရငျထညျ့ပါ။ ပွီးရငျ ဆနျတှကေို ဖုနျးနှဈမွုပျသှားအောငျထိ ဖွညျ့ထားပါ။ အဲ့ဒီအတိုငျး ဆနျထဲမှာ ၂၄နာရီတဈရကျကွာအောငျထားပေးပါ။.
တကယျလို့ ဖုနျးကပွနျမပှငျ့လာသေးဘူးဆိုရငျ နောကျတဈရကျလောကျထပျမွုပျထားပါ။ ၃၊၄ ကွိမျလောကျလုပျပွီးလို့မှ ပါဝါပွနျမပှငျ့လာသေးဘူးဆိုရငျတော့ ဖုနျးကိုအသုံးပွုလို့မရနိုငျတော့ပါဘူး။ ဆနျ အစား ဆီလီကာဂယျြကိုလဲ အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။
တကယျလို့ သငျ့အိမျမှာ နှေးနှေးထှေးထှေးရှိတဲ့ ဗီရိုတဈလုံးလောကျရှိမယျဆိုရငျ ဗီရိုထဲမှာ ၂ရကျ၊၃ရကျလောကျထားပေးထားပါ။ ဒီမှာတော့ ဗီရိုကအပးခြိနျခပျနှေးနှေးသာရှိနရေပါမယျ။ အပူခြိနျမြားတဲ့နရောတှကေိုတော့ရှောငျမှ ဖွဈပါမယျ။
Hair dryer , radiator စတဲ့အရာတှနေဲ့လဲ အခွောကျခံတာတှမေလုပျပါနဲ့။ ရခေဲသတ်ေတာထဲထညျ့ထားတာမြိုးတှလေဲ မလုပျပါနဲ့။
ထမင်းကို လက်နဲ့ စားသင့်သလား၊ ဇွန်းခရင်းနဲ့ စားသင့်သလား…
လူကြိုက်များပြီးရေပန်းစားနေတဲ့ PUBG ဂိမ်းကိုဖန်တီးခဲ့သူနဲ့ ဂိမ်းစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ